क्राको बजार वर्ग | यात्रा समाचार
क्राको बजार वर्ग
मरियम | | Getaways यूरोप, पोल्याण्ड
क्राको बजार वर्ग यसको ,40.000०,००० एम २ र शहरको सबैभन्दा ठूलो पर्यटन रूचिको साथ युरोपभर सबै भन्दा ठूलो मध्यकालीन वर्ग हो।
यसले न केवल यसको आकार र महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भवनहरूको लागि मात्र ध्यान दिन्छ तर यो कति जीवन्त र पर्यटनको लागि पनि छ, किनकि पर्यटक र स्थानीय दुवै यसका केही छतहरूमा पैदल वा कफीको आनन्द लिन भेला हुन्छन्।
त्यसकारण, क्राकोको मुख्य बजार वर्गलाई धेरै यात्रीहरू विश्वको सबैभन्दा सुन्दर मान्दछन् भन्ने कुरामा कुनै अचम्म छैन। अर्को, हामी यो स्थानको भ्रमण गर्छौं यो जान्नको लागि कि यसले यस्तो सम्मानको योग्यको छ।
1 प्लाजाको इतिहास
2 मार्केट स्क्वायरमा के हेर्ने?
2.1 कपडा हल
2.2 सान्ता मारियाको बासिलिका
2.3 पुरानो टाउन हलको टावर
2.4 सान एडाल्बर्टो चर्च
2.5 एडम मिक्युइभलाई स्मारक
यो वर्ष १ 1254० in मा हो जब क्राको स्क्वायर एउटा ठूलो बजार, शहरको सामाजिक र व्यावसायिक गतिविधिको केन्द्रको लागि निर्माण गर्न शुरू गरियो। चाँडै, यसको वरिपरि क्राकोका धनी परिवारहरूले आफ्नो घरहरू निर्माण गर्न शुरू गरे, जुन आज हामी अविश्वसनीय सुन्दर भवनहरूको आनन्द लिन सक्छौं।
अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक भवनहरू जुन क्राको स्क्वायरले श्रृंगार गर्छन् क्लथ हल, टाउन हल टावर, सान्ता मारियाको बासिलिका र सान एडलबर्टको चर्च।
यो युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीकृत पोल्याण्ड मा धेरै खुशी र दुखद दृश्य को दृश्य भएको छ। समय परिवर्तन भएको छ तर आज यो क्राकोको सबैभन्दा प्रिय कोर्नहरू मध्ये एक हो।
यसको वरपर तपाई शहरका केहि राम्रा रेस्टुरेन्ट र मनोरन्जन स्थल भेट्न सक्नुहुन्छ।
मार्केट स्क्वायरमा के हेर्ने?
बजार वर्ग को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्व छ। मध्ययुगीन मूल र बुर्जुवा घरहरूको दरबारहरूले घेरिएको, वर्ग क्राकोका बासिन्दाहरूको लागि मुख्य बैठक पोइन्ट हो।
यो मार्केट स्क्वायरको प्रतीक हो र सब भन्दा फोटोग्राफ गरिएको साइट हो। यो एक रेनेसान प्यालेस हो जसले मूल रूपमा व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न आकर्षित गर्‍यो।
यो १२1257 मा निर्माण गर्न सुरु भयो, एकै समयमा यसलाई स्वागत गर्ने वर्ग सुरु भयो र धेरै व्यक्तिको लागि यसलाई इतिहासको पहिलो व्यावसायिक केन्द्र मानिन्छ।
१ 1555 मा यसले ठूलो आगोको सामना गर्‍यो जसले क्लोथ हल नष्ट गर्‍यो तर यसलाई पुनर्जागरण शैलीमा पुन: निर्माण गरियो इटालेली वास्तुविद् जियोवानी इल मस्का दे पादुआले।
आज यसको सुविधाहरू सांस्कृतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरीन्छ। पहिलो तल्ला क्राकोको राष्ट्रिय संग्रहालयको एक खण्ड हो र तहखानेमा क्राको रानेकको मुनि संग्रहालय हो।
यसमा तपाईं वर्ग निर्माण र मध्ययुगीन बजारबाट धेरै वस्तुहरूको निर्माण पहिले बस्तीहरूको ट्रेसहरू देख्न सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ, क्लोथ हल भित्र तपाई १ th औं शताब्दीबाट पोलिश आर्टको ग्यालरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
एउटा कौतूहलताको रूपमा, क्लथ हलले यो नाम पाउँदछ किनकि वर्गको सुरूमा व्यापारीहरूले कपडा बेच्न स्टालहरू स्थापना गरे र त्यहाँबाट "कपडा बजार" देखा पर्‍यो।
सान्ता मारियाको बासिलिका
सेन्ट मेरीको बासिलिका क्राकोको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मारक हो। गोथिक शैलीमा, यो १ the औं शताब्दीको अन्तमा निर्माण गरिएको हो र यसमा विभिन्न उचाइका टावरहरू द्वारा प्रभावशाली फ्याडेड राखिएको छ।
सब भन्दा माथिल्लो धरहरामा सुनको मुकुट छ जुन याद गर्दछ कि बासिलिकाको उत्पत्तिमा, तुरहीले माथिको बाढीलाई आगो र आक्रमण जस्ता कुनै खतराको बारेमा चेतावनी दिए।
वर्तमानमा यो परम्परा लागू हुँदै छ किनकि हरेक घडीमा तुरहीले हेजना खेल्छ? मारियाकी, एक पारम्परिक ट्युन जुन सबै भन्दा अग्लो टावरमा यसको नाम दिन्छ।
पुरानो टाउन हलको टावर
यो 70० मिटर अग्लो टावर पुरानो क्राको सिटी हलको बाँकी अंश मात्र हो, जुन १ 1820२० मा ध्वस्त पारियो। टावर १ XNUMX औं शताब्दीको अन्तमा निर्माण गरिएको थियो र आज यो दृश्य मञ्चको रूपमा र इतिहासको क्राको संग्रहालयको रूपमा काम गर्दछ।
सान एडाल्बर्टो चर्च
यो सान्ता मारियाको बासिलिकाका रूपमा चिनिन सकेन तर यो पुरानो हो। यसको निर्माण मध्य युगको सुरुदेखि नै हो। क्राको बजार स्क्वायरमा व्यापार गर्न आएका व्यापारीहरूसँग यो धेरै लोकप्रिय थियो।
एडम मिक्युइभलाई स्मारक
यो पोलिश रोमान्टिक कविको सम्मानमा स्मारक हो जुन जून १ 1898 XNUMX XNUMX मा उनको जन्म शताब्दी मनाउन उद्घाटन गरिएको थियो। नाजी कब्जाको बखत यो ध्वस्त भएको थियो तर पछि पोलिश सरकारले यसलाई पुनःनिर्माण गर्‍यो, जुन क्राकोका प्रमुख पर्यटक आकर्षणहरू मध्ये एक थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » क्राको बजार वर्ग
उलानबातरमा के हेर्ने